Hotels in Bagan, Ngapali Beach, Inle Lake, Hot air ballooning business in Myanmar
Public Co., Ltd ၏
▪ Amata လုပ်ငန်းအုပ်စု၏လုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့နိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး Tourism ကုမ္ပဏီအဖြစ် စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ရန်၊​
▪ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မကြာမှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် အနာဂတ်ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ပြည်ပနိုင်ငံသားများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ရရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိလုပ်ငန်းစု၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ပိုမိုမြင့်မားလာနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် Amata Holding Public Co., Ltd ၏ အစုရှယ်ယာသစ်များအား အများပြည်သူသို့ ရောင်းချရခြင်းဖြစ်ပါသည်။​
▪ AYA Trust Securities Co., Ltd.
အမှတ် ၄၁၆၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
▪ CB Securities Co., Ltd.
အမှတ် ၀၃-၀၄၊ Union Financial Center ၊ သိမ်ဖြူလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
▪ KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.
Strand Square၊ အမှတ် (၅၃)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။​
▪ KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
အမှတ် ၇-၆၊ Union Financial Center ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
▪ UAB Securities Company Limited
အမှတ် ၁၀၁၊ မြေညီထပ်၊ The Link Office Tower ၊ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် လင့်လမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။​
အစုရှယ်ယာသစ်များအား အများပြည်သူသို့ရောင်းချရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်​
Grant signing ceremony between United International Group - Amata Hotel Group and IFC, World Bank Group was held in Bagan, at Amata Boutique House on 22nd October 2016.
IFC extends the convertible loan to Amata Hotel Group for the expansion of its hospitality business in Myanmar. Amata Hotel Group will operate its new hotels at two of Myanmar's biggest tourism destinations – Bagan, world-famous for its ancient pagodas, and Inle, home toabiodiversity-rich lake.​
အမတ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာရှင်များ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း
အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း အနှစ်ချုပ်​
အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချရန် သတ်မှတ်ထားသော ခန့်မှန်းအချိန်ဇယား​
This Environmental and Social Review Summary (ESRS) is prepared and distributed in advance of the AMATA group Board of Directors' consideration of the proposed transaction. Its purpose is to enhance the transparency of IFC's activities, and this document should not be construed as presuming the outcome of the Board of Director's decision. Board dates are estimates only. Any documentation which is attached to this ESRS has been prepared by the project sponsor and authorization has been given for public release. IFC has reviewed this documentation and considers that it is of adequate quality to be released to the public but does not endorse the content.​
Amata Holding ၏ အစုရှယ်ယာများကို ပြန်ရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
(+959) 899 044 077, 899 044 088, 899 044 099
Amata Holding Public Co., Ltd မှ ၂၀၁၉ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Amata Holding Public Co.,Ltd အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားစာများကို ရှယ်ယာရှင်များထံသို့ စာတိုက်မှ ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့်
လိပ်စာအပြောင်းအလဲရှိပါက Amata Holding phone 09 899044077,88,99 သို့
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ နံနက် ၁၀:၃၀ ထက်နောက်မကျဘဲ အကြောင်းကြားပေးပါရန်
Amata Holding Public Co., Ltd BODs Meeting
ဒီနေ့ BODs Meeting ကိုတော့ Amata Hotel Group ရဲ့ Head Office မှာကျင်းပခဲ့ပြီး BODs များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်‌မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးကို
၁၃ရက် ၁၂လ ၂၀၁၉ခုနှစ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန်အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒုတိယအကြိမ်‌မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားလွှာ​